एनटीसीमा एचडी भ्वाइससहितको नयाँ सेवा, कुन-कुन मोबाइलमा चल्छ ? – Main Batti
प्रकाशित मिति : ४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १५:११
काठमाडौं । विश्व दूरसञ्चार दिवसको अवसर पारेर नेपाल टेलिकमले आजबाट फोरजीमा आधारित भ्वाइस ओभर (भिओ) एलटिई सेवाको परीक्षण सुरु गरेको छ ।
यो सेवाबाट फोरजी मोबाइलमा हाई डेफिनेसन (एचडी) भ्वाइससहित ग्राहकहरुले सेवामा गुणस्तर थपिएको महसुस गर्न सक्ने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमको यो सेवा प्राप्त गर्न तपाईंको मोबाइल भिओ एलटीई सपोर्ट गर्ने खालको हुनुपर्छ ।
कसरी एक्टिभ गर्ने ?
भिओ एलटिई सेवा प्राप्त गर्न मोबाइलमा *४४४#डायल गर्नुपर्छ । त्यसपछि आउने निर्देशनअनुसार यो सेवा एक्टिभ गराउन सकिन्छ । त्यसपछि मोबाइलको सेटिङमा गएर भिओ एलटिई कल फर एनटिसी सिम समेत इनेबल गर्नुपर्छ ।
यो प्रक्रिया पूरा गरेपछि तपाईंको मोबाइल सेटमा भिओ एलटिई एक्टिभ रहेको संकेत देखापर्छ । त्यसपछि *१११# डायल भयो भने भ्वाइस ओभर (भिओ) एलटिई सेवा उपयोग गर्न सकिन्छ । यो एकपटक एक्टिभ भएपछि २८ दिनसम्म जम्मा १०० मिनेट निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
कुन–कुन मोबाइल सेटमा सपोर्ट गर्छ ?
नेपाल टेलिकमका अनुसार प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै प्रकारका सिममा भिओ एलटिई सेवा प्राप्त हुन्छ । तर यो सेवा सपोर्ट गर्ने÷नगर्ने भन्ने कुरा तपाईंको मोबाइल सेटमा भर पर्छ।
हाललाई सामसुङ, शाओमी र नोकिया ब्राण्डका निश्चित मोडेलहरुमा यो सेवा उपलब्ध छ । भ्वाइस ओभर एलटिई सेवा एक्टिभ हुने मोबाइलका मोडेलहरु यी हुन्–
Galaxy M01s, Galaxy M02, Galaxy M02s, Galaxy M11, Galaxy M12, Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy A12, Galaxy A51, Galaxy A52, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A71, Galaxy A72, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold2.
Redmi9Prime, Mi10, Redmi 9C, Redmi Note9Pro, Redmi 8A
Nokia 5.3, Nokia 7.2, Nokia 3.4
नेपाल टेलिकमले अन्य मोडेलहरुमा पनि भिओ एलटिई सेवा उपलब्ध गराउने काममा क्रियाशील रहेको जनाएको छ ।
अब डेस्कटपबाटै इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्न सकिने
ट्विटरले पुनः बन्द गर्‍यो एकाउन्ट भेरिफिकेसन कार्यक्रम
कोरोनाको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै एनसेलले ल्यायो विभिन्न राहत प्याकहरू (सूचीसहित)
साउदी तेल कम्पनीलाई पछि पार्दै एप्पल बन्यो विश्वकै ठूलो कम्पनी
‘आइफोन एसई २०२०’ अब नेपाली बजारमा
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सुरू, के-के सोध्छन् विवरण लिन आउनेले?
सन्दीप लामिछाने ओडीआई वरीयतामा समावेश
असोज ४ गतेदेखि दशैँको लागि नयाँ नोट साट्न पाईने
बजारमा तरलता अभाव, आज २० अर्बको रिपो जारी गर्दै राष्ट्र बैंक
अब अरूलाई होइन, आफैलाई गाली गरौँ : प्रचण्ड
धादिङ सहित १२ जिल्लामा सीडीओको सरुवा,धादिङमा लम्साल